Japana: Ny herintaona nitorahana bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2011 3:02 GMT
Satria voafidy ny tarehin-tsoratra 暑 (sho) izay midika ‘mamay na hafanàna’ hanehoana ny taona 2010 tamin'ny fankalazàna isan-taona [en] tao Kyoto, ndeha isika hijery fantina “lohahevitra mamay” izay norakofan'ny Global Voices tamin'ity taona ity.
Ny tandindon'i havoanan'i Fuji, tendrombohitra avo indrindra any Japana, any ambadiky ny tanàna ara-barotr'i Shinjuku, ao Tokyo. Sary Nipponnews, © Demotix 14/01/2010
Fahatsiarovana avy amin'ireo horohorontany
Nandritra indrindra ny nankalazàn'i Japana ny faha-dimiambinifolo taonan'ilay horohorontany tao Hanshin izay nandràva ireo faritra manodidina an'i Osaka sy Kobe tamin'ny 1995 ary nahafaty olona anarivony, dia zava-doza toy izay no namely an'i Haiti.
Raha tao ao amin'ny Anjerimanontolo Iraisampirenen'i Japana (IUJ), any amin'ny Prefektioran'i Niigata, mpianatra 100 avy amina firenen-tsamihafa no naneho ny firaisankinan'izy ireo tamin'ny fandrehetana lahinjiron’ (labozian’) ny fanantenana ho an'ny Haitiana, ny Japoney sasany mpitoraka bilaogy dia nitondra fanamarihana mikasika ny anjara raisin'i Japana ho fanampiana ilay firenena tra-doza sady nanakiana ny firenen-dry zareo tamin'ny tsy fisian'ny hetsika nataon'ny fireneny.
Resaka manahirana momba ny Tontolo iainana
Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao hoe ny karazana trondro toy ny thon manga, ny trozona sy ny dauphins ka mety hanintona ny sain'ny rehetra toy ny tamin'ity taona ity. Rehefa nolavina ny fandraràna ny ny fanjonoana thon manga any amin'ny ranomasimbe Atlantika, nihetsika ireo manampahaizana Japoney hanoherana koa ny fandrakofam-baovao mitanila mba hanamarihana ny maha-zavadehibe ny fomba fanjonoana maharitra
Taorian'ny adihevitra momba ny thon, nipongatra ny iray izay nirehidrehitra mihitsy momba ny fanjonoana trozona nony namely sambo Japoney iray mpanjono trozona ireo mafàna fo manohitra ny fanjonoana trozona ary nosamborina ilay Neozelandey kapitenin'ny sambo. Na nisy niainga kely ihany aza ny fihetseham-po mirona amin'ny an'ny tena, ireo japone mpitoraka bilaogy dia nanohitra tamin'ny alalàn'ny fametraham-panontaniana amin'ny fomba fanjonoana ampiharina ka nanambara fa tokony hisy fandrindràna ny jono trozona.
Tsy dia nampiasa fomba diplaomatika loatra ireo mafàna fo sasany avy amin'ny elatra havanana, raha nandrahona trano fandefasana sarimihetsika noheveriny ho nandefa ilay horonantsary The Cove – La Baie de la Honte, fanadihadiana mikasika ny fandripàhana dauphins any Taiji, ary nahazo loka fankasitrahana. Ireo avarapianarana, ireo mpanao gazety sy ireo mpitoraka bilaogy dia nampiaka-peo ho fiarovana ny fahalalahana miteny ary ny zon'ny tsirairay ho afaka mahita ilay horonantsary.
Lavitry ny korontana any amin'ireo nosy lehibe, ny nosy madinika mahafinaritra ao Ogasawara dia nametraka ny firotsahany hofidiana ho isan'ny harem-bakok'izao tontolo izao ao amin'ny UNESCO
Ny Media Vaovao vs Media Tranainy
Tamin'ny 2010, ireo media tranainy japoney, izay ankehitriny dia efa toa nilaozan'ny toetr'andro sy mifamatotra amin'ny fitondrana, dia niatrika fanamby tamin'ny endriny maro ary ireo fiovàna dia sahala amin'ny mbola hisy ihany amin'ity taona ity.
Twitter no teo amin'ny ivon'ny fifantohan-tsaina, satria ilay hafatra fandefa aminy miaty hatramin'ny tarehin-tsoratra 140 dia nampiasain'ny olo-manan-kaja maro hatramin'ny praiminisitra teo aloha ary noraisina ho toy ny fitaovana manana ny lanjany ho fananganana tambajotra sosialy sy mety koa hanampiana hiadiana amin'ny famonoan-tena.
Na dia nisy sasany tamin'ireo fanaovan-gazetin'olon-tsotra aza, toy ny Jan Jan, no tsy maintsy niatrika ny zava-nisy ka nanakatom-baravarana, ary nihetsika ireo gazety an-tsoratra tranainy toy ny Nikkei izay nisafidy ny stratejian'ny fisalobonana tamin'ny alàlan'ny fanakanana ireo rohy avy any ivelany tsy hankany amin'ny tranonkalany, nisy sisintany hafa nipoitra teo amin'ny resaka fanaovan-gazety, rehefa injay ireo miahy tena mpampiasa ny teknolojia vaovao nanomboka namotika ny ampihimamba teo amin'ny fanapariaham-baovao.
Dia nifarana tamin'ny hevi-baovao sy tetikasa vaovao araka izany ny taona: ireo naseho nandritra ny fihaonambe isan-taonan'ny orinasa vao misondrotra eo amin'ny tontolon'ny vohikala – WISH 2010, ary ireo natolotr'ilay sinoa mpitoraka bilaogy sady mafàna fo amin'ny resaka media Michael Anti, izay nanome soso-kevitra ho fanamoràna ny fifankahazoana eo amin'i Japana sy Sina.
Asa sy kolotsain'ny fandraharahàna
Satria Japana nahazaka ny fijotson'ny tsenan'ny asa amin'izao fotoana, mifangaro amin'ny firodanan'ny rafitra momba ny asa, ny fianahan'ny fihetseham-po sy ny vinavinan'asa dia nentin'ny andian-dahatsoratra nahitàna fandrakofam-baovao natao tamin'ny filaharan'ireo mpianatry ny lisea, ny toro-hevitra mafonja avy amina ‘analyste’ iray amin'ny sehatry ny indostria, ary ireo fijery feno dokadoka momba ny fisian'ny karazana NEET vaovao [Fanamarihana avy amin'ny mpandika: sady tsy mpianatra, tsy mpiasa no tsy mpianatra asa – Famaritana nalaina tamin'ny Wikipedia]. Ny kolotsain'ny fandraharahàna efa niainana ela teo amin'ny fiarahamonina Japoney dia mitoetra hatrany ho lohahevitra ifampiresahana eo anivon'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy Japone toy ny fomba fanao hiampitàna amin'ny toeran'ny “olona ara-tsosialy“, ny alikaola ho toy ny tady ifamatorana ara-tsosialy, sy ny fahasarotan'ny fangatahana andro fitsaharana.
Ny Ambony Ambany tamin'ny Politika
Tamin'ity taona ity, nahitàna tranga tsy nampoizina vitsivitsy ny tontolo politika Japone.
Vao niandoha ny volana Janoary, ny governemanta vao avy nofidiana dia nanomboka nitsingilahila rehefa nilaza ny Praiminisitra Hatoyama fa hisintona ny fampanantenana nataony momba ny hanesorana ny tobin-tafika Amerikana tsy ho ao amin'ny prefektioran'i Okinawa: izay nampiseho masoandro fa ny mpoinina ao an-toerana dia niaina ny olana tamin'ny fomba hafa tanteraka miohatra amin'ireo mponina any amin'ny tanibe, lavitra ireo toby.
Rehefa tonga ny fetr'andro, ny volana May, nanambara ny governemanta fa nofoanana ny tetikasa famindran-toerana, ary ireo mponina sorena tao Okinawa dia nampiaka-peo.
Azo lazaina ho taorian'izay avy hatrany, nametra-pialàna ny governemanta ary nisy Praiminisitra vaovao nofidiana, nampivanàka ireo mpifidy marobe.
Eo anivon'ny tsy fahamarinan-toerana ara-politika sy ny fitontongan'ny ara-pihariana mananontanona, tamin'ny lohataonan'ny 2010, nihoaran'i Sina i Japana amin'ny toerany naha-hery faharoa manerantany azy. Ireo Japone manokana, na izany aza, tsy dia gaga loatra ary manohy mitazona ny finoany ny otrikarena ananan'ny firenen-dry zareo.
Nanamarika ny fararano farany teo ny fifandraisana iraisam-pirenena mitoetra andriran'antsy, izay nahatonga an'ireo japone mpitoraka bilaogy sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy nihetsika malaky. Nisy aloha ny fifandonana teo amin'ny sambo mpanjono sinoa sy ny mpiandry sisintany japone noho ny resaka nosikely ifandroritan'ny roa tonta, izay nitarika adihevitra virtoaly teo amina mpitoraka bilaogy roa malaza, ny iray avy ao Sina ny iray avy any Japana.
Avy eo nisy ny fanafihan'ny koreana tavaratra ny nosy koreana tatsimo iray: ireo japone mponin'ny aterineto dia nandinika ny zava-nitranga sy naneho ny ahiahin-dry zareo.
Fiarahamonina sy Kolotsaina
Ny soatoavin'ny fiarahamonina mihevitena ho ivon'ny tontolo dia miseho amin'ny endrika samihafa – ny tena firehana goavana dia ny fihenan'ny isan'ny mpianatra mandeha mandranto fianarana any ivelany, na ny kojakoja momba ny tena manokana, toy ilay mpitoraka bilaogy manoratra mikasika ny “famonoantena mian-dàlana” ao anatina fiarahamonina mizotra ho amin'ny fahanterana sy iray hafa koa misaintsaina ny ara-moralin'ny fianihana ny Tendrombohitra avon'i Mont Fuji.
Naka endriky ny amin'izao fotoana ny tantara, raha toa ireo trano fandroana ho an'ny daholobe nentim-paharazana nivadika ho toeran'ny ‘manga’ malaza, nahasondriana ny firenena ny samouraï Sakamoto Ryoma, ary ny haikanto monozukuri [”mamoron-javatra”] nifanena tamin'ny DIY [Do It Yourself] sy ny teknolojia. Mifikitra mafy koa ny lovan-drazana satria ny teatra Kabuki ao Ginza dia an-dalam-panavaozana ary ny renivohitr'i Nara fahiny dia mankalaza ny faha 1300 taonany. Ary dia mazava ho azy, izao tontolo izao dia mankalaza ny faha- 30 taonan'i Pacman noho i Google!
Niara-nanoratra ity lahatsoratra ity i Tomomi Sasaki